Weerar Bambaano ahaa oo Caawa lagu qaaday xarunta degmada Boon... | Universal Somali TV
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in Koox hubeysan ay weerar bambaano ah Caawa ku qaaday Xarunta Degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho.
Goob Joogayaal, ayaa inoo sheegay iney maqleen Jugta qaraxa iyo rasaas xoogan oo xogtay, taasoo ay ridayeen Ciidamadii ilaalada ka hayay xarunta Degmada Boondheere oo ah halka Caawa weerarka lagu qaaday.
Warar soo baxaya, waxa ay sheegayaan in laba qof ay ku dhaawacmeen Bambaanada oo midi yahay askari katirsan Ciidamada amaanka, halka qofka kalena yahay wiil dhalinyaro ah oo goota ka ag dhawaa.
Ciidamada amaanka, weerarka kadib sameeyay howlgalo baaritaano ah, Kuwaasoo aan la soo sheegin in wax dad ah lagu soo qabtaya, Ciidamada waxey ku bexeen dhinaca M.C.H ku yaala nawaaxiga halka weerarka dhacay, iyagoo tuhunsan in dhanka Siinaay ay ku carareen dableydii weerarka geysatay.
AMniga Muqdisho, ayaa malamahan faraha ka sii baxayay, iyadoo shalay oo u dnabeysay Muqdisho lagu dilay 5 Qof, Dadka la dilay laba kamid ah waxey ahaayeen Maamulayaasha iskuul ku yaala Suuqa Xoolaha, Wiil dhalinyaro 17 Jir ahaa waxaa lagu dilay Xamar Jajab, halka labada qof ee kalana ku geeriyoodeen is rasaaseyn ka dhacday Xaafada Nasteexo ee degmada Wadajir.
Kan-xigaMaxkamadda Ciidamada oo sii deysay 4 ...
Kan-horeMadaxweyne Xaaf: hadii gobolada gubta...
47,169,628 unique visits